Faa’iidada Caafimaad ee Ku Jirta Jimicsiga (Exercise-ka). | Hargeysa World~Herald
Faa’iidada Caafimaad ee Ku Jirta Jimicsiga (Exercise-ka).
OpinionFaa'iidada Caafimaad ee Ku Jirta Jimicsiga (Exercise-ka).
Ma doonaysaa inaad hesho dareen wanaagsan, inaad hesho tamar waarta, xattaa in noloshaada oo sii dheeraata. Keliya waxaad samaysaa jidh-dhis joogto ah.
Noocyada jimcsiga ee la samayn karo waxaa ugu door roon Socodka, dabbaalashada, kubbadda cagta, Ka-xaynta baaskiiladaha, samaynta sit-ups-ka, iyo Push-up-ka.
Xeel-dheerayaasha caafimaadku waxay wakhti badan soo gudbinayeen faa’iidada caafimaad ee jimicsiga joogtada ah. Jimicsigu keliya ma hagaajinaayo muuqaalkaaga guud. Waxa uu hagaajinayaa oo uu bilcinayaa guud ahaan caafimaadkaaga jidheed. Jimicsigu waxa uu kaa caawinayaa inuu yareeyo xanuunada kula soo dersaaya. Xanuunadaas waxa kamid ah Xanuunada wadnaha sida faaluga(Stroke), xanuunka Macaanka nooca labaad(Type-two diabetes). Xanuunka lafaha(Osteoporosis), dhiig-karka(High blood pressure), xubno xanuunka(arthritis) iyo Xattaa noocyada kamid ah kansarka.
Xarunta baadhista iyo xakamaynta xanuuunada ee magaceeda loo soo gaabiyo CDC, waxay sheegaysaa in xanuunada wadnuhu ay yihiin horseedka xanuunada keena dhimashada ugu badan Maraykanka. Sidoo kale, xanuunada dufanka iy dhiig-karku waxay Iyana kor u qaadaan halista xanuunada wadnaha asiiba. Khubarada caafimaadkuna waxay caddaynayaan in labadan jirraba uu yareeyo jimicsiga joogtada ahi. Sidaas oo ay tahayna, Jimicsiga joogtada ahi waxa uu kor-u-qaadaa dheecaanka looyaqaano endorphins. Waa hoormoono ay soo daayaan maskaxda iyo qanjidhka (pituitary gland). Hoormoonadani waxay yareeyaan kaarka(pain), sidoo kale, waxa ay dadka ka caawisaa inuu farxo oo uu qalbigiisun deganaansho dareemo, cadhada iyo werwerkuna ku yaraado.
Jimicsigu waxa uu hagaajinayaa kor-u-qaadista qul-qulka dhiiga ee u dhaxeeya wadnaha iyo xididda dhiiga si loo gaadhsiiyo qaybaha jidhka. Jimicsigu waxa uu yareeyaa Miisaanka, waxa uu gubaa sonkorta jidhka, waxaanu yareeyaa, tamar ahaana u beddeelaa sonkortii la kaydin lahaa. taas oo horseeda in qofka miisaankiisu kor waayo.
sadam Osman Kaabash. Hareysa, Somaliland.